khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal खोप माग्न नसक्ने सरकारको भोट माग्ने कत्रो हिम्मत ! – khabarmuluk.com
खोप माग्न नसक्ने सरकारको भोट माग्ने कत्रो हिम्मत !
खोप लगाएर जनता बचाउने कि चुनाव गरेर पैसा पचाउने ?
जेष्ठ १५,२०७८- केपी शर्मा
लगातार रुपमा बढीरहेको कोरोना संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रुपमा अहिले केहि सकम हुन थालेको छ । यो हुनु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हो । तर जनतलाई बन्दी बनाएर परीक्षण गर्न जाने वाताबरण सिर्जना नगराउन खोजिएको हो भने त्यसले थप जोखिम बढाउनेछ । जति धेरै परीक्षण गराउन सकियो त्यति नै जोखिम कम हुने हो । यहाँ अहिले गाउँगाउँमा कोरोनासँग मिल्दो जुल्दो लक्ष्यण भएका धेरै जसोले परीक्षण नै गराउन पाएका छैनन् ।
यसले गर्दा मृत्यु दर बढ्दै गएको छ । संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले देशमा भर पुर्ण रुपमा निषेधाज्ञा गरेको छैन शुक्रबारदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडा पार्दै सर्बसाधारणलाई घरबाट निस्कन समेत रोक लगाएको छ ।सर्बसधारण हिड्डुल गर्न नपाउने भएपछि परीक्षण गराउन जाने अवस्था नहुँदा संख्या कम हुनु स्वभाविकै हो ।
सरकारले संक्रमण फैलिन नदिन यसो गरेको हो भने राम्रै हो ।तर, राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित हो भने यसले क्षति गर्ने छ । जनतालाइै घरभित्रै थुन्दैमा कोरोना कम हुने होइन । उनीहरु पनि सजक भईसकेका छन् ।पहिलो पटक शुक्रबार कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सयबाट तल झरेको छ।
सरकारले नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्न सक्नुपर्छ । ३ करोड जनाता रहेको सानो देशमा पनि पर्याप्त खोपको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । खोपले नै केही हदसम्म खोजिम कम गराउने देखिएको हुँदा जनतालाई थुनेर होइन खोप लगाएर बचाउन खोजौं । यी नै जनता भए मात्रै घोषणा गरिएको चुनावको अर्थ रहन्छ । करोडौ खर्च गरेर गर्न लागेको चुनाव भन्दा पहिलो प्राथमिकता खोप बन्नुपर्छ । अरुबाट सहयोगको मात्रै भर पर्दा कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएर बसेकाहरुको जस्तो हालत हुन सक्छ ।
सरकारले अहिले सम्म १० लाख डोज भन्दा खोप किन्न सकेको छैन । अरु २० लाख डोज अनुदानको हो। तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा जम्मा ३० लाख खोप त्यो पनि एक बर्षको अबधिमा।
पहिलो डोज खोप लगाएका दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा छन।पहिलो खोप लगाएकाहरुले अब केही दिन भित्र पनि दोस्रो खोप लगाउन नपाउने हो भने त्यो खोपको कुनै अर्थ नहुने देखिन्छ । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्ने हो तर, गइरहेको देखिदैन । डब्ल्यूएचओले अनुमति दिएका थुप्रै खोपहरु छन् । हामी भारतको मात्रै भर परेर बस्नु हुँदैन । पहल गर्नु पर्यो जुन देशबाट चाँडो हुन्छ त्यहाबाट खोप ल्याएर नागरिकलाई लगाइहाल्नुपर्छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरले नराम्रोसँग प्रभावित गराएको भारतले स्पष्टसँग भनिसकेको छ कि आफ्ना जनतालाई नलगाई अन्य देशलाई खोप दिन सकिदैन । उत्तरी छिमेकी देशले १० लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यो पनि भारतकै जस्तो अपूरो नहोला भन्न सकिदैन । यदि पैसा छैन भने विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सहयोग मागौं । उमेर पुगेका सबैलार्ई लगाउने हो भने खोप खरिदै गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति:जेठ १५, २०७८